अब सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने, कस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट ? – kalikadainik.com
अब सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने, कस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट ?
सोमबार, साउन ०६, २०७६ | ७:१५:३४ |
काठमाडौं । सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेको छ । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)भन्दा दोब्बर बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
एमआरपी भने अझै ८ लाख थान बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा पासपोर्ट बन्दा पनि सकिन दुई वर्ष लाग्छ । त्यसैले विभागले दुई वर्षको समय राखेर ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले दिएको विशेषता अँगाली अन्य मुलुकभन्दा पछि नपर्न सरकारले ई–पासपोर्टमा जाने निर्णय गरेको खड्काको भनाइ छ ।
एमआरपीकै विस्तारित रूप हो, ई–पासपोर्ट । यसमा थप माइक्रो चिप्स हुन्छ । त्यसमा व्यक्तिगत विवरणसहित आँखाको रेटिना, औंठाछापलगायत फिचर राखिएका हुन्छन् । यसले गर्दा व्यक्ति झुक्किने हुँदैन ।
प्रारम्भिक डकुमेन्ट नै फरक पारेर आएको खण्डमा भने त्यसबाट पनि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्ता डकुमेन्ट जारी गर्दा आरम्भमा जति झन्झट भए पनि अध्ययन आवश्यक छ । ई–पासपोर्टलाई कतिपय अत्याधुनिक विमानस्थलमा अध्यागमन अधिकारीले जाँच गर्दैनन् ।
मेसिनले पासपोर्टधनी र बोक्ने व्यक्ति उही हो वा होइन भन्ने ‘सेन्सर’ गर्ने हुनाले यसबाट दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ । एक व्यक्तिको पासपोर्टमा अर्को उड्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । उक्त मेसिनमा एकपटक त्यस्तो पासपोर्ट प्रयोग भएको र त्यही पासपोर्ट अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरे रोकिदिन्छ । त्यसैले कसैको पासपोर्टमा हुलिया परिवर्तन गरी हिँड्ने सम्भावना पनि न्यून हुन्छ ।